तेजाब छ्याप्नेलाई यसरी झम्टिइन् कंशाकारले, खसी उपहार नपाएपछि डिएसपीको तिघ्रा छेड्ने धम्की ! (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
तेजाब छ्याप्नेलाई यसरी झम्टिइन् कंशाकारले, खसी उपहार नपाएपछि डिएसपीको तिघ्रा छेड्ने धम्की ! (भिडियो)
काठमाडौं । न्युज २४ टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम ‘सीधाकुरा जनतासँग’को आज ४५१ औं एपिसोड हो । कार्यक्रमको आजको एपिसोडमा पनि विभिन्न विशेष रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।
१. ‘सीधाकुरा’को प्रभाव : बिन्दबासिनीलाई एसिड छ्याप्ने ब्यक्ति ६ बर्षपछि समातिए
मकवनपुर । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले हेटौंडामा करिब ६ बर्ष अघि स्थानीय बिन्दबासिनी कंशाकारको शरीरमा तेजाब (एसिड) छ्यापेर फरार रहेका दीलिपराज केशरीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । केशरीले वि.सं.२०७० साल बैशाख ९ गते पीडित कंशाकारलाई आफूसँग विवाह गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, सो प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि हेटौंडाको पिपलबोट चोकमा पसल सञ्चालन गर्दै आएकी विन्दबासिनीलाई भारत महाराजगञ्ज अमरपूर्वन वडा नम्बर ६ घर भएका केशरीले तेजाब छ्यापेर फरार भएका थिए ।
२. कोहलपुरका डिएसपीले धम्की दिएको अडियो सार्वजनिक
कोहलपुर । इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका इञ्चार्ज डिएसपी हेमबहादुर शाही र तरुण दलका स्थानीय नेता केशर खड्काबीचको फोनवार्ता सार्वजनिक भएको छ । सुरुमा डिएसपी शाहीले तरुण दलका कोषाध्यक्ष केशर खड्कालाई खसी मागेको अडियो सार्वजनिक भएको हो । सार्वजनिक अडियोमा ठेक्का पट्टाको काम गर्ने खड्कासँग घनिष्ठ सम्बन्ध भएका बेला डिएसपी शाहीले प्रहरीलाई दशैं मान्न खसी मागेका छन् । चाडवाडमा खसी, पैसा माग्ने दाई–भाईको सम्बन्ध अहिले दुश्मनीमा परिणत भएको छ ।
३.मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुको खुलेआम दादागिरी, विद्यार्थीको आवाज सुन्दैन सरकार
काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो बर्षहरुमा सबै भन्दा धेरै विद्यार्थीहरु आन्दोलित हुने र विवादित बनेको छ, चिकित्सा शिक्षा संकाय । राजनीतिक दलको आड–भरोसामा नेता र व्यवसायीहरुले मनलाग्दी खोलेका मेडिकल कलेजहरुले चर्को शुल्क असुल्दै आएका छन् । यसै विषयमा सरकारको चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आइओएम)ले ट्युसन, ल्याब, लाइब्रेरी लगायत सबै शुल्क समेटेर उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार शुल्क तोकेको छ ।